Iimpawu ezili-12 zeZodiac zibekwe ukusuka kuninzi ukuya kububi obuncinci - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Sonke sahlukile xa kufikwa kunyamezelo nomonde, ukanti abanye bethu banenqanaba elisezantsi kunabanye kwaye ukude nokuba bangcwele. Siye sajonga iinkwenkwezi kwaye ngoku sinokutyhila ukuba yeyiphi imiqondiso ye-zodiac eyona imbi kwaye ngubani ongafanelanga ukuba angcoliswe. Ngaba uyingqondi engendawo yokwenyani, okanye ngaba unobubele kakhulu ukuba wenze iyelenqe ngobuqhetseba? Sele siza kukufumana yonke iMidlalo yeeTrone kuwe, lixesha lokufumanisa ukuba ngubani oyena mntu unenkohliso.
Ukuba ngumntu okhohlakeleyo kuza ngokwendalo kwimiqondiso ethile yezodiac, ukanti abanye bakhetha ukuphakama ngaphezu kwesihendo sokuthatha umhlaba kwaye bajike umqolo wabo ebubini. Ukuthathela ingqalelo i umgangatho ukusuka kwezona zintle ukuya kwezona mpawu zezodiac ziphantsi kufuneka isinike isalathiso.
Ngaba unetyala lokufuna ukuziphindezela nanini na xa umntu ekuwela, okanye ukhetha ukujika esinye isidlele? Makhe sifumanise ukuba ngubani ongafanelanga ukuwela d ukufumanisa apho ubeka khona indawo yethu ecekisekayo ! Abanye benu bangakothuka, kwaye abanye benu kufuneka boyike...
-Fumana wethu umgangatho weyona miqondiso ilungileyo yezodiac -
IScorpio lolona phawu lubi lwezodiac
Ngaphandle kokuthandabuza kakhulu, indebe yolona phawu lubi lwezodiac luya kwiScorpio! I ubuntu Scorpio izele ziileya ezininzi ezintsonkothileyo, ukanti iimpawu ezibengezela ngokuqaqamba kobona buchule kunye nobuqili bazo. Thatha iingcebiso zethu kwaye ungangeni kwicala elibi lala mfo.
ULeo lichule lokucwangcisa
Kungokwemvelo ukuba uphawu lothando lwengqalelo lunengqondo yendoda. U-Leo uyakuthanda ukuba yinkwenkwezi yomboniso kwaye uya kwenza nantoni na ukuze uhlale kwindawo ebonakalayo! ULeo nguye eyona nto inokwenzeka ukuba uphawu lwezodiac ludume kwaye abakakulungeli ukuvumela ithuba labo lityhutyhe eminweni yabo.
IVirgo yenye yezona zinto zibalaseleyo iimpawu zodiac ezikrelekrele , nangona rhoqo basebenzise amandla engqondo ukuqulunqa amacebo amabi. I-Virgo inokwenza izinto ezintle kwaye zimsulwa phezu komhlaba, kodwa phantsi kwayo yonke into, mhlawumbi baceba izicwangciso ezininzi zobuqili.
Mlumkele ungqondongqondo ongendawo
Njengomnye kwaba bathathu Iimpawu zomlilo , ubuntu be-Aries ngokwemvelo bu-spiky kwaye abasoze bavumele ukuba bahambe yonke indawo. I-Aries ngokuqinisekileyo iyaqhuma, kodwa olu phawu lwezodiac nalo uyonwabile ekucebeni ukutshatyalaliswa kweentshaba zabo.
I-Taurus ayinakunqandwa kwimiba yobubi
Wonke umntu uyazi ukuba iTaurus yenye yezona zibalaseleyo iimpawu ezinenkani ze-zodiac , kodwa ubusazi na indlela abangendawo ngayo? I-Taurus ayilona uphawu lwe-horoscope oluthatha ukuwela ngokulula, kwaye ngokwenene unenkathazo ukuxolela kwaye uqhubekeke.
I-Capricorn ayichasananga nokucwangcisa ...
I-Capricorn yaziwa ngokubanda kunye nokubala umlinganiswa obenzayo amandla okwenyani ukubalelwa. I-Capricorn luphawu oluhlakaniphile kwaye luhlala lukhetha iimfazwe zabo ngobulumko; ubukrelekrele babo buthetha ukuba banokugqitha nabani na.
Ubuntu be-Aquarius bukhululekile kwaye bukhululekile de bazive bebanjwe kwiimeko ezingathandekiyo. Nanini na xa u-Aquarius eziva ehlaselwa okanye exhalabile, icala labo elibi lithande ukuphuma; kwaye sonke isihogo siyaphuka, nangona sinobulungisa uphawu oluhle lwezodiac .
I-Gemini ayinayo into yobubi
Njengomnye wezona zininzi iimpawu zezodiac ezithethayo , uGemini uyakuthanda ngokunyanisekileyo ukungqongwe ngabanye abantu kunye ebengayi kuphupha nokuceba amacebo amabi kunye nokuhlaselwa. Abantu beGemini banoxolo nothando kunayo nayiphi na enye into.
Njengomnye wezona zininzi iimpawu zezodiac ezibuthathaka , akufanele kumangalise ukuba uMhlaza awukho phezulu kwinqanaba lokuvumisa ngeenkwenkwezi. Umhlaza sisithandwa hayi umlwi kwaye ajike kungquzulwano kunye nedrama kwithuba lokuqala.
ISagittarius ichasene nobubi
Ukuba bekufuneka sibize u-a uphawu lwezodiac olungakhathaliyo kunye nolonwabo lokuhamba-lucky, ngokukhawuleza satsalwa kwiSagittarius. Njenge uphawu oluhlekisayo lwezodiac , I-Sagittarius ixakeke kakhulu ngokuqhekeza amahlaya ukuze igxininise kulawulo lwehlabathi kunye nezinye izinto ezimbi.
Iintlanzi ziyazithiya ii-vibes ezimbi
ubuntu Pisces abanalo ithambo elibi emzimbeni wabo kunye neenzame zokunqanda ukugxeka apho kunokwenzeka. IiPisces yenye yazoiimpawu ezintle zezodiackwaye kungakhathaliseki ukuba iimvakalelo zabo zibuhlungu kangaphi na, abanakuze basabele kakubi.
ILibra lolona phawu lwezodiac lumnandi!
ILibra yenye yeempawu ezintathu zezodiac ezintle kakhulu kwintsingiselo yazo entle baphelelwa lithemba xa kufikelelwa kububi. Ukwenza iyelenqe ngokuchasene nabanye abantu kuchasene ngokupheleleyo ne-mantra yeLibra enothando nenenkathalo.
Ziziphi iiNodi zeLunar kwi-Astrology? S T Uchaza Konke
Ubuntu beSagittarius: Fumana into ebenza bathandeke kakhulu